जो मेरो ब्वाइफ्रेण्ड बन्छ, उ त तड्पेर मर्छ होला -पार्वती राई | Narendra Raule
Posted By: Narendra November 22, 2014
निकै हट् देखिनु भएको छ नि ?
पर्‍यो नि ! नत्र त सेलाइ हाल्यो नि !
पछिल्लो समय सांगीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा अमेरिकामा जानुभयो । कस्तो रह्यो अमेरिका बसाई ?
एक महिना अमेरिका बसाई निकै रमाइलो भयो । न्युयोर्क, एट्लान्टा, बाल्टिमोरमा कार्यक्रम थियो । यो टोलीमा दीपक लिम्बु, छिरिङ गेल्मे, इन्दिरा जोशी, निमा रुम्बा र म थियौं । अहिले सम्मको यो सबैभन्दा लामो विदेश बसाई हो । केही ऐतिहासिक ठाउ“ घुमियो । सपिङ गरियो । मैले चाहेका कतिपय सपनाहरु भने अधुरै रहे । केही पाईयो, केही गुमाईयो ।
अमेरिका कस्तो लाग्यो त ?
अमेरिका धेरैको सपनाको संसार हो । त्यहाँ हरेक कुरा नियम, कानुनमा चल्ने, सबै नागरिक एकैनासका, धनी, गरिब बीचको भेदभाव भेटिएन । विकासले भरिपूर्ण, जे खोज्यो त्यही पाइने रहेछ । बडो अनौठो लाग्यो ।
उतै बस्न मन लागेन ?
मलाई नेपालमै रमाइलो भइरहेको छ । अमेरिकाको कमाइ मैले नेपालमै गरिरहेकी छु । किन बस्नु उतै ? दुःख त यता पनि छ, उता पनि छ । त्यो अर्काको देश हो । यहाँका जस्ता आफन्त, साथीभाइ त्यहाँ भेटिदैनन् । म त यतै सन्तुष्ट छु ।
कतिले अमेरिकामै घरजम गरेर बसौं भनेर प्रस्ताव पनि राखे होलान् नि ?
(मुस्कुराउँदै) त्यो चाहीं नभनौं होला ।
भन्नोस् न । केही घटनाहरु सुनौं ।
कतिले प्रस्ताव राखे । तर मेरो लागि विवाह पहिलो प्राथमिकता होइन । अमेरिका गए पनि आफ्नै तरिकाले जान्छु । कसैमाथि निर्भर हुँदिन । आफ्नै पसिना, पौरखमा रमाउनुको बेग्लै मजा छ ।
मंसिर लागिसक्यो । उमेर पनि पुगिसक्यो । विवाह गर्ने बेला भएन र ?
बल्ल २३ वर्षमा छु । उमेर छ“दैछ नि । फेरि विवाहबारे अहिले नै मैले सोचेको छैन । अझै मेरो करिअर राम्रो बनाउने, राम्रा–राम्रा म्युजिक भिडियोमा खेल्ने विचार छ । अनि मात्र त्यतातिर विचार गरौंला ।
चाहे जस्तो जीवनसाथी नभेटेर पोे हो कि ?
म जस्तै खोजेको हो । जातभात हेर्दिनँ, मलाई बुझ्ने खालको हुनुप¥यो । यस्तो जीवनसाथी भेटियोस्, त्यसको कुनै अर्को अप्सन नै नहोस् ।
अब कस्ता खालका म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्न मन छ ?
दर्शक, श्रोताहरुले समय अनुसार नया“ स्वाद खोज्छन् । अलि फरकपन खोज्छन् । फेरि एकसे एक नया“ मोडलहरुको आगमन हुँदैछ । कसरी हुन्छ, पहिरन, अभिव्यक्तिमा फरकपन ल्याउन चाहन्छु ।
एउटा म्युजिक भिडियो लोकप्रिय हुन के–के चाहिन्छ ?
पुरै युनिटको सहभागिता चाहिन्छ । गीत, लय मात्र राम्रो भएर हुँदैन । त्यसमा अभिनय, निर्देशन, मेकअप पनि मिल्नुपर्छ । क्यामेराम्यान र प्राविधिक पक्षको पनि उत्तिकै हात हुन्छ ।
महिनामा कतिवटा भिडियोमा अभिनय गर्नुहुन्छ ?
सामान्यतया ४ देखि ९ वटासम्ममा अभिनय गर्छु । तीजको बेलामा भने २३–२४ वटामा पनि काम गरेको छु ।
हम जायगा भन्ने फिल्ममा ब्यस्त छु ।
यो कस्तो फिल्म हो ?
यो शुद्ध नेपाली फिल्म हो । मंसिर ५ गतेबाट देशभर प्रदर्शन हुँदैछ । सुरेन्द्र पुनको निर्देशन र भोज गुरुङले उत्पादन गर्नु भएको हो । मैले दुई वटा गीतमा नाँचेको छु । र, यसमा मेरो अभिनय पनि रहेको छ ।
तपाई कस्तो खालको व्यक्ति हो ?
काममा रमाउने खालको । काममा समर्पित हुँदा घर, परिवार बिर्सन्छु । लठ्ठ पर्छु । दायाँबायाँ नहेर्ने खालको क्या । काम नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो मेरा लागि ।
तपाईका कस्ताकस्ता फ्यानहरु छन् ?
अनेकथरी । प्रेम प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव राख्नेदेखि हरेक दिन भिडियो नहेरी निदाउन सक्दिनँ भन्ने सम्मका छन् । तपाई यति राम्री हुनुहुन्छ, स्वर सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैले चाहना राख्छन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव राख्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
फ्यानहरु मेरा भगवान हुन् । म सबैको भावनालाई कदर गर्छु । सकारात्मक रुपमा लिन्छु । अर्काको भावनाको हत्या गर्नुहुदैन । तर म सम्झाउँछु । एक दिन सबैको समय आउँछ, पर्खिनुहोस् भन्छु ।
यतिबेला सबैभन्दा बढी के मिस हुन्छ ?
स्कुले जीवन एकदमै मिस गर्छु । ती दिनहरु सुनौला थिए । बिर्सनै नसकिने । साथीभाईसँग झगडा पथ्र्यो, एकछिनमै कुरा मिल्थ्यो । अहिले सम्झिदा त सपना जस्तै लाग्छन् ।
त्यो बेला प्रेम गरेको याद आउँदैन ?
म त्यो बेला केटा जस्तै थिए“ । कडा स्वाभावकी भएकाले कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्ने हिम्मत गर्दैनथे । त्यो बेलाको प्रेम पनि के प्रेम ! जिस्किए जस्तो मात्र लाग्छ ।
कसैले प्रेम प्रस्ताव त राखे होलान् नि ?
म त्यस्तै ७, ८ मा पढ्ने बेला होला, एक जनाले ‘आई लभ यु’ भन्यो । स्कुलभन्दा बाहिरको केटाले हो । म त बच्चै थिएँ । हाँसेर उडाइदिएँ । त्यसपछि कतिपय अवस्थामा नर्भस भए“ । लाजले रातो भए“ । कति केटाले प्रस्ताव राख्दा रुँदैरुँदै ‘बुबालाई भनिदिन्छु’ पनि भनेँ ।
मन पराउनेहरु थुप्रै पो रहेछन् है !
हो, म स्कुले जीवनदेखि नै डान्सर थिएँ । मन पराउनेहरु धेरै नै थिए, र अहिले पनि छन् । मुख्य कुरा मैले मन पराउनुप¥यो नि !
माया भन्ने चिज के रहेछ ?
प्रेम अन्धो हुन्छ भन्छन् नि । कसैसँग यो एक सेकेन्डमै बस्न सक्छ । प्रेम के हो आफैलाई थाह हुन्न । यो कुरा माथिबाटै तय हुन्छ । चोखो माया कोही एक जनासँग हुन्छ ।
ब्वाइफ्रेण्ड बनाइएन ?
अहिले सम्म त छैन । म त समय दिन पनि भ्याउँदिन । जो मेरो ब्वाइफ्रेण्ड बन्छ, उ त तड्पेर मर्छ होला । बलियो प्रेमको आधार समय हो । ख्याल गर्ने, बुझ्ने समय पनि चाहियो । म सँग प्रर्याप्त समय कहिल्यै नहुने । फेरि समय दिन पाइएन भने सम्बन्ध दिगो बन्दैन ।
ब्वाइफ्रेण्ड बनाउने त मन रहेछ नि ?
जीवनमा माया गर्ने, केयर गर्ने कोही त चाहिन्छ नै । तर अहिले स्वार्थी माया गर्नेहरु धेरै छन् । टाढा भाग्न मन लाग्छ । त्यस्तो देखि डर लाग्छ । अब चाहिँ एउटा बनाऊ कि भन्ने पनि लागिरा’छ । तर साथीभाइहरुको घटना देख्छु, रोएको, धोका दिएको । त्यो देखेपछि म डराउँछु ।
भनेपछि कसैसँग प्रेम नगर्ने ?
म त सिधै विवाह गर्ने सोचमा छु । त्यो पनि मागी विवाह ।
ब्लु फिल्म हेर्नु भएको छ ?
हहाहा (हाँस्दै) छैन् । (फेरि ! एकछिनपछि) सन्जय दत्तको मुभी छ, ब्लु फिल्म त्यो चैं हेरेकी छु । कुनै बेला कसैको मोवाइल, ल्यापटप चलाउँदा पनि आक्कल–झुक्कल त्यस्तो फिल्म हेरेकी छु ।
सेक्सको अनुभव लिनु भएको छ ?
कसरी पत्याउने र ?
कस्सम अहिलेसम्म मैले सेक्स गरेकी छैन । पसलमा राखेका सबै सामान बिक्छन् र ? कोही त डेट एक्सपायर भएर सकिन्छन् नि, हैन र ?
विदेश जाँदा डान्सबारमा जानुभयो ?
निजी कुरा नसोधौं न । एकबारको जुनीमा सबै अवसरहरुको सदुपयोग गर्नुपर्छ । बाँकी कुरा आफै बुझ्नुहोस् ।
कुनै सेलिब्रिटी देख्दा सेक्स गर्ने मुड चल्छ ?
त्यस्तो नकारात्मक सोच मनमा आउँदैन । म हिन्दु हो । त्यसमाथि नेपाली केटी । विदेशी संस्कारमा हुर्किएकी होइन नि !
कसैसंँग डेट जान पाए कसलाई रोज्नुहुन्थ्यो ?
पुरा हुन नसक्ने कुरा सोचेर के गर्नु ? त्यो कुरा त उमेरको पागलपन हो । म त्यो अवस्था पार गरिसकेँ । व्यवहारिक भइसकेँ ।
तपाईको नाम शंकर बिसीसँग जोडिन्छ नि । साँचो कुरा के हो ?
क्षमता भए कोहीसँग झुक्नु पर्दैन । उहाँसँग मेरो व्यवसायिक सम्बन्ध मात्र हो । गुरु चेलीको सम्बन्ध हो । अरु हैन । मैले अहिलेसम्म गलत बाटो अपनाएको छैन । मेरो क्षमताले काम पाएको हो । चुनौति सामना गरेर म अघि बढ्छु ।
तपाईको कुन कुराको तारिफ गर्छन् अरुले ?
जिउँडाल । हँसिलोपन, हेयरस्टाइल ।
पुस्तक पढ्ने । युट्युबमा नयाँ मुभी हेर्ने । मैले भर्खरै मात्र मोदीका भाषणहरु सुनेँ । उर्जा मिल्यो । एक प्रकारको प्रेरणा मिल्यो ।
पुस्तक पढ्न कत्तिको मनपर्छ ?
जीवनीहरु पढ्न मन लाग्छ । तसलिमा नसरिनका पुस्तकबाट प्रभावित छु । सेतो धरती पढ्दा कतै त्यो पात्र आफैं हो कि लाग्यो । साया, समर लभ पढ्दा रमाइलो लाग्यो ।
– See more at: http://nepalipatra.com/news/detail/11271/2/.meroml#sthash.nIBYCoCI.dpuf
Be the first to comment on "जो मेरो ब्वाइफ्रेण्ड बन्छ, उ त तड्पेर मर्छ होला -पार्वती राई"